အိန္ဒိယ: အိန္ဒိယနိုင်ငံကက်ရှမီးယားအပေါ်ဖျန်ဖြေ၏ Trump ကမ်းလှမ်းမှုကိုဆန့်ကျင်ပြောဆိုရန်ကြောက်လန့်ဖြစ်ပါသည်: Asaduddin Owaisi | အိန္ဒိယသတင်း - Tele RELAY တစ်ခု
မူလစာမျက်နှာ » အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ "အိန္ဒိယ: အိန္ဒိယနိုင်ငံကက်ရှမီးယားအပေါ်ဖျန်ဖြေ၏ Trump ကမ်းလှမ်းမှုကိုဆန့်ကျင်ပြောဆိုရန်ကြောက်လန့်ဖြစ်ပါသည်: Asaduddin Owaisi | အိန္ဒိယသတင်း
Hyderabad: အမေရိကန်သမ္မတများ၏တောင်းဆိုချက်ကို Exception Donald Trump အဆိုပါကက်ရှမီးယားပြဿနာအပေါ်အိန္ဒိယနှင့်ပါကစ္စတန်အကြား "ဖျန်ဖြေ" ကိုပူဇော်သက္ကာဘို့, Asaduddin, အ AIMIM ၏ဦးခေါင်းကိုဗုဒ္ဓဟူးနေ့ကပြောပါတယ် Owaisi ဤမေးခွန်းကိုဖြေကြားကြပြီမဟုတ်။ ငါတို့သည်သူ့ကိုအများ၏ကြောက်လန့်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏နိုင်ငံခြားရေးမူဝါဒပြဿနာတစ်ခုကြောင်းကိုသက်သေထူတယ်။
"အမေရိကန်သမ္မတသူကက်ရှမီးယားအပေါ်ဖျန်ဖြေမည်ဟုထပ်လောင်းပြောဆိုသည်။ အဘယ်ကြောင့်စေ့စပ်ဖြန်ဖြေပါသလဲ Trump အဆက်မပြတ်ပြန်လုပ်နှင့်အိန္ဒိယအစိုးရတုံ့ပြန်ခဲ့ပါဘူး။ အဘယ်သူသည်အိန္ဒိယနိုင်ငံခြားရေးမူဝါဒဦးဆောင်? ငါတို့သည်အဘယ်ကြောင့်သူ့ကိုဤမျှကြောက်လန့်ရှိပါသလဲ ကြှနျုပျတို့သညျ "တုံ့ပြန်မ Owaisi သတင်းစာကိုပြောသည်။
"ဒီဝန်ကြီးချုပ်အဖြစ် Narendra Modi Trump အကြောင်းကိုမှတုန့်ပြန်ခဲ့ကြသင့်ပါတယ်။ ဒါဟာအိန္ဒိယနိုင်ငံအတွက်ဟိန္ဒူမူဆလင်ပြဿနာရှိကွောငျးဟုဆိုကာခွငျးအားဖွငျ့ကမ်ဘာပျေါတှငျအိန္ဒိယ defames ။ ကျနော်တို့နိုင်ငံမှာဟိန္ဒူမူဆလင်ပြဿနာရှိလျှင်ငါ "ဝန်ကြီးချုပ်ပြောသည်ကိုမေး Owaisi .
ဒါကြောင့်ယခင်ကဒေသတွင်း၌ဖြစ်ပွားနေသောအငြင်းပွားမှုအိန္ဒိယနှင့်ပါကစ္စတန်တို့ကမြန်မာနိုင်ငံသပြေလည်သင့်ကြောင်းဖော်ပြထားခဲ့ပါတယ်ပေမယ့်အင်္ဂါနေ့တွင်, အမေရိကန်သမ္မတ Trump ဖကက်ရှမီးယားအပေါ်ဖျန်ဖြေခြင်းအဘို့အယင်း၏အဆိုပြုတင်ပြခဲ့ပါသည်။
Jammu နှင့်ကက်ရှမီးယား၏ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအနေအထားကိုပြောင်းလဲပစ်ရန်နယူးဒေလီမှသမိုင်းဝင်ဆုံးဖြတ်ချက်များ၏အခြေအနေတွင် Trump ၏မှတ်ချက်။
ကက်ရှမီးယားရှိအခြေအနေတစ်ဦးက "ရှုပ်ထွေးအခြေအနေ" Trump ကဆိုသည်။ "ဒါဟာဘာသာတရားနှင့်အတူလုပ်ဖို့အများကြီးရှိပါတယ်။ သငျသညျဟိန္ဒူနှင့်မွတ်စလင်။ ဤသည်ဆယ်စုနှစ်များစွာကြာရှည်ခံသည်။ "
အိန္ဒိယနှင့်ပါကစ္စတန်အကြားတင်းမာမှုများပြန်ရုပ်သိမ်းဖို့ BJP ကဦးဆောင်, ဗဟိုအစိုးရရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကအောက်ပါလျှော့ချပါပြီ အပိုဒ် 370 အရာ Jammu နှင့်ကက်ရှမီးယားအထူး status ကိုအာမခံ။ အိန္ဒိယပါလီမန်မှာလည်းနှစ်ခုနယ်မြေထဲသို့ဒေသခွဲဝေ "ပြန်လည်ဖွဲ့စည်း" ၏တစ်ဦးဥပဒေကြမ်းမွေးစား: Jammu နှင့်ကက်ရှမီးယားနေတဲ့ဥပဒေပြုလွှတ်တော်ရှိပြီး Ladakh ဥပဒေပြုပရိသခြင်းမရှိဘဲ။
20 သန်း CTF ဖို့ Facility စွမ်းအင်ပါဝင်အားဖြင့်ရရှိသောအပိုဆောင်း $